Bible Mu Nsɛm Sika Nantwi Ba No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
AO! AO! Dɛn na nkurɔfo no reyɛ yi? Wɔrebɔ nantwi ba mpae! Dɛn nti na wɔreyɛ eyi?
Bere a Mose kɔkyɛe wɔ bepɔw no so no, nkurɔfo no kae sɛ: ‘Yennim nea ayɛ Mose. Enti momma yɛnyɛ onyame a obedi yɛn anim afi asase yi so.’
Mose nua Aaron kae sɛ: ‘Eye. Munyiyi mo sika asomkaa mmrɛ me.’ Bere a nkurɔfo no yɛɛ saa no, Aaron nanee ne nyinaa na ɔde yɛɛ sika nantwi ba. Na nkurɔfo no kae sɛ: ‘Yɛn Nyankopɔn a oyii yɛn fii Misraim no ni!’ Afei Israelfo no gyee wɔn ani kɛse, na wɔsom sika nantwi ba no.
Bere a Yehowa huu eyi no, ne bo fuwii. Enti ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: ‘Sian kɔ ntɛm. Nkurɔfo no reyɛ bɔne kɛse. Wɔn werɛ afi me mmara na wɔrekotow sika nantwi ba.’
Mose kaa ne ho sian fii bepɔw no so. Na bere a ɔbɛn hɔ no, nea ohui ni. Nkurɔfo no reto dwom na wɔresaw twa sika nantwi ba no ho hyia! Mose bo fuwii araa ma ɔtow abopon abien a mmara no wɔ so no guu fam, ma ebubui pasaa. Afei ɔfaa nantwi ba honi a wɔde sika agu no nanee. Na ɔyam no muhumuhu.
Nkurɔfo no ayɛ bɔne kɛse. Enti Mose ka kyerɛɛ mmarima no binom sɛ wɔmfa wɔn nkrante. Mose kae sɛ: ‘Ɛsɛ sɛ nnipa bɔne a wɔsom nantwi ba honi a wɔde sika ayɛ no wu.’ Enti mmarima no kunkum nnipa 3,000! So eyi nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye na yɛsom Yehowa nkutoo, a yɛnsom bosom biara anaa?
Sɛ wohwɛ mfonini no a, dɛn na nkurɔfo no reyɛ, na adɛn nti na wɔreyɛ saa?
Adɛn nti na Yehowa bo fuwii, na bere a Mose behuu nea nkurɔfo no reyɛ no, dɛn na ɔyɛe?
Mose ka kyerɛɛ mmarima no binom sɛ wɔnyɛ dɛn?
Asuade bɛn na ɛsɛ sɛ yenya fi asɛm yi mu?
Kenkan Exodus 32:1-35.
Ɔkwan bɛn so na saa asɛm yi ma yehu sɛnea Yehowa te nka bere a yɛde atoro som fra nokware som no? (Ex. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)
Sɛ Kristofo repɛ biribi agye wɔn ani, te sɛ ebia nnwonto ne asaw a, ahwɛyiye bɛn na ɛsɛ sɛ wɔyɛ? (Ex. 32:18, 19; Efe. 5:15, 16; 1 Yoh. 2:15-17)
Nhwɛso fɛfɛ bɛn na Lewifo no de gyaw yɛn bere a wogyinaa pintinn yɛɛ adetrenee no? (Ex. 32:25-28; Dw. 18:25)